Orinasa Lalàna #1 ambony ao Dubai | Orinasa & Mpisolovava UAE | Orinasa Mpampanoa lalàna
Firenena mpiaro ny lalàna ambony # 1 any Dubai, UAE
Torohevitra momba ny fisafidianana orinasan-dalàna any UAE
Firafitry ny lalàna tsara indrindra any Dubai
Na mitady torohevitra ara-dalàna ho an'ny tenanao, ny ankohonanao, na ny orinasanao ianao, dia ilaina ny mitandrina fatratra amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny orinasa mpanao lalàna. Mety ho toy ny fizotrana sarotra miaraka amin'ireo orinasam-pitsarana maro any Dubai io.
Ny fahitana mpisolovava tsara dia mihoatra ny fividianana orinasam-pitsipika tsy ara-dalàna ao amin'ny bokin-telefaona na ny fiantsoana ilay akaiky anao indrindra. Mila mandinika ireo zavatra ilainao manokana ianao ary mampifanaraka ireo amin'ireo orinasa mpahay lalàna za-draharaha amin'ny fanatanterahana ireo filàna ireo.
Any Dubai, mizara roa ny mpisolovava, miankina amin'ny asany - ny consultants ara-dalàna sy ny mpisolo vava.
Ny consultant legal dia tsy mampihatra lalàna eo anatrehan'ny tribonaly. Matetika izy ireo dia mitantana asa ara-dalàna mifandraika amin'ny orinasa sy ny sehatra hafa. Manomana fifanarahana izy ireo ary manombatombana ny ara-dalàna na raha tsy izany amin'ny fifanakalozana orinasa. Etsy ankilany, ny mpisolovava dia ireo mpisolovava miseho ao amin'ny efitrano fitsarana. Ny asan'izy ireo dia ny miaro na mampihatra ny zon'ny mpanjifany.
Tsy ny orinasa mpanao lalàna rehetra any Dubai no manana fahazoan-dàlana ho an'ny mpanolo-tsaina sy ara-dalàna. Ny ankamaroany dia manana fahazoan-dàlana amin'ny toro-hevitra ara-dalàna. Ny fananana io fahazoan-dàlana io fotsiny dia midika fa tsy afaka miseho eny amin'ny fitsarana ireo mpisolovava ao amin'io orinasa mpisolovava io. Amin'ny lafiny iray, ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpisolovava sy mpanolo-tsaina ara-dalàna dia manome alalana ireo mpisolovava hiatrika raharaha fitsarana.
Na iza na iza dia afaka mahita hoe inona ny karazana fahazoan-dàlana ananan'ny orinasan-dalàna any Dubai amin'ny fijerena ny anaran'ny varotra. Raha misy orinasam-pitsarana UAE manana ny fehezan-teny hoe 'mpisolo vava sy mpanolo-tsaina ara-dalàna', dia afaka misolo tena ny mpanjifa any amin'ny fitsarana ny firma mpanao lalàna. Fa raha ny anarana ara-barotra ihany no manana ny teny hoe 'consultancy legal', midika izany fa ny mpisolovava dia tsy manana mpisolovava afaka miakatra fitsarana.
Na mitady toro-hevitra ara-dalàna na solontena ara-dalàna, dia tsara foana ny misafidy orinasan-dalàna miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hiaro sy hiaro ny lalàna. Ny ligigation dia mety foana amin'ny tranga rehetra. Araka izany dia mila orinasa mpisolovava afaka misolo tena anao any amin'ny tribonaly ianao raha ilaina izany.
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (mpisolovava UAE) izany ve ny orinasa mpanao lalàna. Ny serivisinay dia miainga amin'ny fifanakalozana ara-barotra ka hatrany amin'ny fitsarana ady heloka, famahana ny fifanolanana ary ny lalànan'ny mpianakavy.
Ahoana ny fomba hisafidianana orinasam-pitsarana any UAE?
Mba hanakarama orinasa mpanao lalàna ho an'ny raharahanao manokana na raharaham-barotrao dia tsy maintsy ampahafantarina tsara momba ny karazana orinasa mety tsara indrindra aminao izy. Ireto misy antony tokony hodinihina sy torohevitra amin'ny fisafidianana ny orinasan-dalàna tsara indrindra ho anao.
Fari-pahaizana manokana: Ny orinasan-dalàna sasany dia mametra ny fahaizany manokana amin'ny sehatra manokana raha ny hafa kosa mitantana ny raharaha ankapobeny. Noho izany, mety hahita orinasa miavaka manokana amin'ny raharaha orinasa na raharaha fananganana ianao. Alohan'ny hisafidiananao mpisolovava dia alao antoka fa hojerenao hoe aiza ny faritry ny lalàna iainan'izy ireo manokana. Amin'izay dia ho fantatrao raha izy ireo no mpahay lalàna tsara indrindra hikarakara ny raharaham-pitsaranao.
Reputation sy Track Record: Rehefa misafidy orinasam-pitsarana dia fantaro raha toa ka nahavita tranga mitovy amin'ny anao izy ireo. Raha manana izy ireo dia tadiavo ny fomba nitondrany ireo tranga ireo. Nandeha tamin'ny fomba lava sy nandreraka fitsarana ve ny raharaha rehetra? Sa nandamina ny ankamaroan'ny raharaha tany ivelan'ny fitsarana izy ireo? Mila mahita ny taham-pahombiazan'ny orinasa ianao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanontanianao ny orinasa ho an'ny referansa. Mety hahita fijoroana vavolombelona koa ao amin'ny tranokalan'ny mpisolovava ianao.
Cost: Ilaina ny mahafantatra ny tahan'ny fandoavan'ny orinasa alohan'ny handraisanao azy ireo sao tratry ny fiambenana ianao. Jereo ny rafitry ny faktiorany. Moa ve izy ireo mandoa vola isaky ny ora, na tahan-drindrina maharitra, na amin'ny sandan'ny contingency? Ny fahalalana an'izany dia hanampy anao hamantatra raha toa ka izy ireo no orina mety aminao mifototra amin'ny teti-bolanao.
Fahafantarana ny mpisolovava: Azonao atao ny mianatra ireo mpisolovava ao amin'ny orinasa tadiavinao. Mametraha fanontaniana momba ny kara-panondro misy azy, ny fiaviany ara-panabeazana ary ny fikambanan'izy ireo. Miresaha amin'izy ireo raha mila izany ianao. Tadidio fa hivoaka ianao hanakarama serivisy ara-dalàna tsara indrindra.
Inona avy ireo fanamby mifandraika amin'ny fiasa amin'ny orinasa lehibe?
Amin'ny ankapobeny, ny orinasan-dalàna dia heverina ho lehibe na lehibe rehefa manana mpisolovava sy paralegaly marobe amin'ny asany izy ireo. Ny orinasan-dalàna lehibe dia mety tsy ny lalànan'ny lalàna tsara indrindra ho anao foana.
Na dia mety hanana ny tombony ho azy aza ny fanakaramana orinasam-panjakana 'be anarana', dia tsy hoe tsy maintsy misy ny olana. Anisan'izany ireto:
Tsy misy fiheverana manokana ny raharaha: Ny orinasan-dalàna lehibe dia manana tranga an-taoniny maro hiatrehana izany. Ireo mpisolovava dia mety tsy hanana fotoana hanomezana ny tranga tsirairay ny fanoloran-tena, ny saina ary ny fanoloran-tena ilaina. Ny trangao dia mety ho voatelina fotsiny amin'ny sisa tranga toy ny 'isa hafa'.
Ny tsy fivadihana amin'ny mafy noho ny raharahanao: Rehefa miasa amin'ny orinasam-pitsarana kely kokoa ianao dia manakarama mpisolovava tena izy fa tsy orinasa matanjaka. Azonao atao ny mifanakalo hevitra momba ny raharaham-pitsarana amin'ny mpisolovava fa tsy paralegal na mpanampy ara-dalàna. Miaraka amin'ny orinasam-pitsarana lehibe, mety tsy hihaona amin'ny mpisolovava anao mihitsy ianao mandra-piakatra amin'ny fitsarana. Na mety mila miara-miasa amin'ny ekipa mpisolovava ianao. Araka izany dia olona tsy mitovy isak'izay mifandraika amin'ilay orinasa mpanao lalàna ianao. Mety tsy hahazo fanazavana na tari-dalana ianao raha mila izany amin'ny tranga toy izany.
Tarehimarika ambony: Orinasa mpanao lalàna lehibe no fantatra amin'ny fandoavana taha ambony. Araka izany, ny olon-tsotra dia mety tsy maintsy mamaky ny banky vao afaka manome izany taha izany.
Tombony azo amin'ny fiasana amin'ny orinasa kely lalàna
Ireo orinasam-pitsarana madinidinika ao Dubai dia sokajiana amin'ny isan'ny mpisolovava amin'ny asany. Ny orinasan-dalàna kely dia mety ahitana mpisolovava 20 na latsaka. Ny sasany amin'ireo tombontsoa azo amin'ny fandraisana orinasa kely dia:
Ny raharahanao dia laharam-pahamehana: Ny orinasa mpanao lalàna kely dia tsy manana ny habetsahan'ny asa ananan'ny orinasa mpanao lalàna lehibe. Midika izany fa ireo mpisolovava mikarakara ny tranga tsirairay dia hanao izany amin'ny fifantohana tsy misy fizarana sy ny fanoloran-tena tanteraka. Noho izany, ny mpanjifa tokana dia afaka mahazo toky fa ireo mpisolovava dia hiatrika ny raharahany amin'ny saina sahaza azy.
Fifandraisan'ny mpanjifa sy ny mpisolovava: Amin'ny maha mpanjifa anao mandray orinasa mpanao lalàna kely dia manana fidirana mivantana amin'ny mpisolovava manatrika ny raharaham-pitsaranao ianao. Azonao atao ny mangataka ny hampitan'izy ireo ny fampahalalana izay heverinao fa ilaina. Ity fifandraisan'ny mpanjifa sy ny mpisolovava ity dia tsy fahita firy ao amin'ny orinasa lehibe iray.
laza: Mora kokoa ny mamantatra ny lazan'ilay mpisolovava madiodio amin'ny raharaham-barotrao amin'ny orinasa kely kokoa. Azonao atao ny manara-maso ireo rakitsoratra nataony taloha, sy ny valiny hatreto. Manome anao fahatokisana fa eo am-pelatanana ny raharaha. Ankoatr'izay, ny mpisolovava tsirairay ao amin'ny orinasa mpanao lalàna kely dia hita misimisy kokoa. Midika izany fa eo an-toerana ny lazan'izy ireo. Tsy afaka miafina ao ambadiky ny lazan'ny orinasa mpisolovava izy ireo. Araka izany, miady am-pahavitrihana sy mahery setra izy ireo mba hahazoana ny vokatra tsara indrindra amin'ny tranga rehetra misy azy ireo, na kely toy inona aza.
Vidiny mora vidy: Ny lafo kokoa dia tsy mitovy amin'ny serivisy tsara kokoa. Tsy miantoka fandresena koa izany. Miaraka amin'ny orinasa kely iray dia azonao atao ny mahazo ny serivisy matihanina tsara indrindra amin'ny vidiny mirary. Fifanarahana fandresena fandresena izany.
Safidio ny Firenena mpiaro ny lalàna UAE
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (mpisolovava UAE) dia orinasan-dalàna any Dubai izay manana traikefa lehibe momba ny lalànan'ny fianakaviana, ny lalàna mifehy ny heloka bevava, ny lalàna momba ny asa fanorenana ary ny serivisy fifanakalozana ara-barotra amin'ny ankapobeny. Manana ekipa mpisolo vava mpanolo-tena ao an-toerana sy miteny Arabo izahay miaraka amin'ny zon'ny mpanatrika ao amin'ny fitsarana UAE sy ny famotopotorana heloka bevava.
Orinasa mpahay lalàna ambony ao Dubai, Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Emirà Arabo Mitambatra), dia nanompo ireo mpanjifa maneran-tany sy isam-paritra tamin'ny alàlan'ny serivisy sy sehatra fanaony manokana nandritra ny folo taona mahery. Amin'ny maha-orinasa lalàna feno serivisy azy, ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Emirà Arabo Mitambatra) dia nanana tombontsoa sy tombontsoa amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa isan-karazany momba ny fitsarana, ny famahana ny fifanolanana ary ny toro-hevitra momba ny lalàna. Ekipa matihanina momba ny lalàna mahay izahay izay manome serivisy serivisy misahana ny asa ara-dalàna any Dubai, UAE.
Raha mila serivisy ara-dalàna ao UAE ianao, Mifandraisa aminay avy hatrany. Manolo-tena izahay ary manolo-tena hanome izay ilainao ara-dalàna rehetra.